HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Holandey Hongroà Iban Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Norvezianina Nzema Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Rarotonga Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tamoul Tarasque Tatar Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Olona 5 700 mahery no nampianarin’ny Vavolombelon’i Jehovah hamaky teny sy hanoratra, tamin’ny 2011.
Olona 9 000 mahery no nampianarinay hamaky teny sy hanoratra tato anatin’ny 25 taona.
Olona efa ho 12 000 no nihanahay namaky teny sy nanoratra, nanomboka tamin’ny 2002. Hoy i Agnes, 82 taona: “ Rehefa nampandrenesina hoe hisy kilasy fianarana mamaky teny sy manoratra ao amin’ny fiangonana, dia faly erỳ aho nisoratra anarana. Nahay nanoratra ny anarako aho tamin’ny lesona voalohany. ”
Hoy ny mpianatra iray 55 taona: “ Tsy nalefan’ny ray aman-dreniko tany an-tsekoly aho ka tsy nieritreritra mihitsy hoe mba hahay hamaky teny sy hanoratra. ”
Olona 19 000 mahery no nahay namaky teny tato anatin’ny 15 taona. Hoy i Felizarda: “ Faly aho satria lasa afaka mitady andinin-teny ao amin’ny Baiboly sy mamaky azy ireny amin’ny hafa. Sarotra be tamiko izany taloha. ”
Izao no nosoratan’ny biraon’ny sampanay: “ Tsy afaka nianatra ny olona maro nipetraka tany amin’ny toerana mitokana, taloha. Vitsy koa ny ankizivavy nandia fianarana. Nandray soa tamin’ilay kilasy fianarana mamaky teny sy manoratra àry ny olon-dehibe. Maro no lasa matoky tena kokoa aorian’ilay fianarana. ”